Shirka sanadlaha ee Arrimah Garsoorka Dalka oo maanta ka furmay Muqdisho:- (Sawiro) - Awdinle Online
Shirka sanadlaha ee Arrimah Garsoorka Dalka oo maanta ka furmay Muqdisho:- (Sawiro)
February 12, 2020 (Awdinle Online) –Magaalada Muqdisho ayaa Maanta waxaa ka furmay shir Sannadeedka Garsoorka dalka, kaas oo sanadkii labaad muddo 30 sanno ah ka dib la qabanaayo,waxaana uu socon doonaa muddoo laba Cisho ah.
Shirka waxaa ka qayb galaya guud ahaan laamaha garsoorka ee heer federaal iyo Heer maamul goboleed,Wasiirada Cadaaladda Dowladda & Dowlad Goboleedyada,iyada oo looga hadlayo arrimo la xiriira Garsoorka dalka iyo sidii loo tayeyn lahaa.
Shirka ayaa waxaa sanadkaan looga hadlaya caqabadaha heysta Garsoorka dalka,waxyaabihii ka hirgalay balan qaadkii Shirkii sanadkii hore la qabtay iyo sidii si huufan loogu Shaqeyn lahaa Shacabka Soomaaliyeed.
Shirka sanadlaha ee Arrimaha Garsoorka Dalka waxaa sanad waliba lagu iclaamiyaa hiigsiga Hay’adaha Garsoorka iyo Cadaaaladda oo ah waxyaabaha ugu badan ay baahida u qabaan Shacabka.
7-dii Febaraayo 2019-kii, waxaa Muqdisho lagu soo gaba-gabeeyay Shirkii sanadlaha ahaa oo ay ka qaybgaleen Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Dalka, Wasiirka Caddaaladda, Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Hantidhowraha Guud ee Qaranka, Guddoomyaha Maxkamadda Racfaanka ee Gobolka Banaadir, Guddoomyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir, Xildhibaanno, Culimaa’udiin, diblomaasiyiin iyo Wakiillo ka socda maxkamadaha Dowlad goboleedyada dalka ka jira.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sanadkii tagay Muqdisho ka daah-furay shir sanadeedkaan oo lagu soo bandhigay Caqabadaha iyo Hufnaanta Cadaaladda.
Previous articleDowlad goboledka jubbaland oo Ciidamo geyay deegaano ka tirsan Gobolka Gedo
Next articleShir looga hadlayo Maqaamka Muqdisho oo ka furmay isla magaalada